China Nkedo ígwè enamel Dutch oven cookware ite maka isi nri casserole factory na-emepụta |Forrest
Tụba ígwè enamel Dutch oven oven cookware ite maka isiri casserole
24cm nkedo ígwè casserole na nkedo ígwè mkpuchi, nwere ike ime ka mkpuchi nke akwukwo nri mmanụ, enamel, matt nwa, wdg Atụmatụ: nchara na-eguzogide, kpụ ọkụ n'ọnụ even.
Na mkpuchi ite
Casserole na-eguzogide okpomọkụ
aha ngwaahịa Nkedo ígwè enamel casserole
Dayameta 24cm (18cm/20cm/26cm/28cm)
Ọkpụrụkpụ 3.5-4 cm
CTN nha 29x27x27cm
igbe dị n'ime nha 27cmx26cmx12.5cm
Nkedo ígwè nwere ike na-enye ọbụna kpo oku, na ọ nwekwara ike iguzogide oke okpomọkụ, na-eme ka ígwè cookware nkedo dị mma maka searing.
A na-eji mmanụ ihe oriri, poselin enamel, na ihe ndị ọzọ kpuchido nchara na-etolite, ma nwee ike ime ka ọ ghara ịrapara,
ya mere anyị cookware bụ nnọọ ntụkwasị obi mgbe a na-eji maka nri na-atọ ụtọ, ọ bụrụ na ị na-eji anyị cookware, ị ga-ahụ ndụ anyị mma karịa.
Ngwa igwe ihe nkedo anyị na-eji usoro nkedo ọdịnala na-enwe ike ịkpọ nke ọ bụla aha ugboro abụọ maka ịdịte aka agbakwunyere.
Ngwongwo na-ejigide okpomọkụ nke igwe nkedo pụtara na ị nwere ike iji ntọala hob na oven dị ala wee chekwaa ike mgbe ị na-esi nri.
Ọ na-ejigide okpomọkụ ogologo oge karịa ihe ọ bụla esi nri ya mere ọ dị mma maka iji na okpomọkụ kachasị ala, ya mere, ọ dịkwa oke ọnụ ahịa.
Ígwè nkedo na-adịkwa mfe ịsacha, sitekwa n'aka - ọ bụ ezie na a ga-achọ imirikiti na ịhịa ahịhịa na ahịhịa rọba maka ihe fọdụrụ ahụ siri ike karị.
Na-ehicha ihe nkedo ígwè gị
uAdịla n'akụkụ ala mkpuchi na ite ahụ, nke ahụ pụtara na mkpuchi enamel enweghị ike imetụ ibe ya aka ozugbo,
nke ahụ ga-ebute ọkọ n'elu.
Ngwugwu na Mbupu:
Hebei Forrest nkedo ụlọ ọrụ na-arụpụta na mbupụ mpaghara ọpụrụiche kichin ngwa maka afọ 20, ngwaahịa akara bụ nkedo ígwè gụnyere nkedo ígwè cookware nkedo ígwè teapot , nkedo ígwè trivel na na.Anyị na-arụ ọrụ nke ọma ISO9001 njikwa njikwa mma site na nkedo, ọgwụgwọ elu, mbukota, ibuga na mkpochapụ, ị ga-enwe obi ike ịhapụ anyị ihe niile, anyị ga-akwado gị na usoro niile.
Ebumnuche ụlọ ọrụ anyị bụ ịnye ngwaahịa na ọrụ dị elu, na-eme ka azụmahịa dịkwuo mfe, na-akwụwa aka ọtọ bụ isi anyị maka ndị ahịa.Ngwaahịa anyị naFDA & LFGB CA65kwadoro.Ndị otu anyị nwere ike chepụta na hazie ngwaahịa maka ndị ahịa.
Nzaghachi onye zụrụ
Q1.Kedu ihe bụ usoro mbukota gị?
A: N'ozuzu, anyị na-ebu ngwaahịa anyị na igbe ọcha na-anọpụ iche na katọn aja aja.Ọ bụrụ na ị debanyere aha patent n'ụzọ iwu kwadoro,
anyị nwere ike ịkwakọ ngwaahịa ndị ahụ na igbe akara gị mgbe ị nwetachara akwụkwọ ikike gị.
Q2.Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: T / T 30% dị ka nkwụnye ego, na 70% tupu nnyefe.Anyị ga-egosi gị foto nke ngwaahịa na ngwugwutupu ị kwụọ ụgwọ ahụ.
Q3.Kedu usoro nnyefe gị?
Q4.Kedu maka oge nnyefe gị?
A: N'ozuzu, ọ ga-ewe ụbọchị 30 ruo 60 ka ị nwetachara ụgwọ mbụ gị.Oge nnyefe a kapịrị ọnụ dabere
na ihe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ nke iwu gị.
Q5.Ị nwere ike ịmepụta dịka ihe nlele ahụ si dị?
A: Ee, anyị nwere ike ịmepụta site na nlele gị ma ọ bụ eserese teknụzụ.Anyị nwere ike wuo ebu na ihe ndozi.
Q6.Kedu ihe bụ ụkpụrụ iwu nlele gị?
A: Anyị nwere ike ịnye ihe atụ ma ọ bụrụ na anyị nwere akụkụ dị njikere na ngwaahịa, ma ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ ihe nlele na
Ọnụ onye ozi.
Q7.Ị na-anwale ngwongwo gị niile tupu ibuga?
Q8: Kedu otu esi eme ka azụmahịa anyị dị ogologo na mmekọrịta dị mma?
A:1.Anyị na-edebe ezigbo mma na ọnụahịa asọmpi iji hụ na ndị ahịa anyị na-erite uru;
2. Anyị na-asọpụrụ onye ahịa ọ bụla dị ka enyi anyị ma anyị na-azụ ahịa n'eziokwu ma na-eme enyi na ha,
n'agbanyeghị ebe ha si.
Mmasị ọ bụla, biko nweere onwe gịkọntaktịanyi!Daalụ
Nke gara aga: Ihe eji esi nri nkedo ọla Dutch nwere mkpuchi nkedo ígwè na-acha uhie uhie
Osote: 0.8L Japanese tetsubin nkedo kettle teapot na igwe anaghị agba nchara waya ntupu Enamel n'ime na eserese n'èzí
Obere 500 ml 13.5cm nkedo ígwè kenkowaputa agba ename...
Ihe nkedo nke akụkụ anọ nwere pan na-esi esi esi nri na ...
Ihe nkedo na-ekpo ọkụ n'ígwè Cookware Tọọ Oval Casserole ...
Japanese enamel nkedo ígwè teapot 0.8L
Ọrịre dị ọkụ 31cm Enaled nkedo Iron Shallow Casser...
12" Nkedo nkedo bbq sizzler gri emechara nke ọma ...